शैक्षिक सत्र सञ्चालनको तयारी के छ ? - Pradesh Today शैक्षिक सत्र सञ्चालनको तयारी के छ ? - Pradesh Today
शैक्षिक सत्र सञ्चालनको तयारी के छ ?
कोरोनाका कारण अहिलेको शैक्षिक सत्रको आधा समय सकिसकेको छ । विद्यार्थी विद्यालय जान नपाउँदै आधा सकिएको शैक्षिक शत्रलाई स्थानीय सरकारले कसरी सञ्चालनको तयारी के छ ? वैकल्पिक शिक्षण सिकाइलाई मान्यता दिने गरी सरकारले शिक्षण सिकाइ सहजीकरण २०७७ जारी गरेको छ । कोरोना कहरमा रोगबाट बचाउनुपर्ने चुनौती एकातिर छ भने अर्कोतिर विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र खेर जान नदिने चुनौती पनि छ । शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन कस्ता प्रयास हुन थालेका छन् ? हाम्रा बालबालिकाले वैकल्पीक सिकाइमार्फत सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छन् त ? आदि प्रश्नमा रहेर प्रदेश टुडे दैनिकको नियमित स्तम्भ टुडे राउण्ड टेबलमा स्थानीय तहका शिक्षा शाखा संयोजकहरुलाई ल्याएका छौं ।
परिवेश अनुसार शिक्षण सिकाइ
कोरोना कहरका बीचमा शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी बनाउन हामीले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले यसअघि पनि वैकल्पीक शिक्षण सिकाइ शुरूवात गरिसकेका छौँ । चैत महिनामा लकडाउन भइसकेपछि विद्यार्थीको शिक्षण क्रियाकलापलाई सक्रिय बनाउन हामीले रेडियोमार्फत शिक्षण सिकाइ गरेका छौँ । त्यो शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी नभएपनि त्यसबाट हामीले धेरै कुरा सिकेका छौँ ।
अब अहिले कोरोना महामारीका कारण रोगबाट बचाउनुपर्ने चुनौती एकातिर छ, भने अर्कोतिर बालबालिकाको भविष्य उज्वल बनाउनका लागि शैक्षिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा वैकल्पीक शिक्षण सिकाइलाई यसअघि प्रभावकारी नहुनुका विभिन्न कारणहरू खोजेका छौँ ।
वास्तवमा रेडियोबाट शिक्षण सिकाइ गर्ने कुरामा शिक्षकहरूले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिदिनुभएन् । बडो दुःखको कुरा हो । उहाँहरूले शिक्षण सिकाइ रेडियोबाट गर्नुभयो, तर विद्यार्थीलाई पढाइ हुने समय तालिका उपलब्ध गराउनुभएन् ।
त्यसपछि रेडियोबाट शिक्षण सिकाइ गरेको सय प्रतिशत नै फेल खायौँ । रेडियोबाट पढाउन थालेपछि मैले केही प्रतिनिधिमूलक विद्यार्थी एक सय ७५ जनालाई रेडियो सिकाइबारे सोध्दा सबैले अनविज्ञ नै रहेको अर्थात् रेडियोबाट पढाउन लागेको बारे थाहा नै नभएको बताएका थिए । यसले गर्दा पनि शिक्षकले विद्यार्थीलाई कुनै जानकारी नदिएर शिक्षण सिकाइ गरेको प्रष्ट भएको छ ।
अर्को कुरा के थियो ? भने त्यो समयमा हाम्रो उद्देश्य खाली विद्यार्थीलाई सक्रिय बनाउनेमात्रै थियो । तर पछिल्लो समय अब अहिले केन्द्र सरकारले वैकल्पीक शिक्षण सिकाइलाई मान्यता दिने निर्देशिका जारी गरेपछि अब यो शैक्षिक सत्र नै वैकल्पीक शिक्षण सिकाइमै सकिने निश्चित देखिएको छ । अब वैकल्पीक शिक्षण सिकाइमा सिकेका सम्पूर्ण कुरा परीक्षामा सोधिने भनेपछि अब पहिलेको भन्दा अलि बढी गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ ।
विद्यार्थीलाई वैकल्पीक शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी बनाउनका लागि शिक्षकसँगै अभिभावक र विद्यार्थीको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध रहेको छ । विद्यार्थीलाई वैकल्पीक सिकाइमार्फत प्रभावकारी बनाउनका लागि शिक्षकले आफूले पढाउने विद्यार्थीलाई फ्लोअप गर्नुेपर्ने हुन्छ । विद्यार्थीको पहुँच कुन माध्यमबाट सिकाउँदा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने अभिभावक र शिक्षक दुबैको चिन्तन हुनुपर्छ ।
अब अहिलेको अवस्थामा तुलसीपुर उपमहानगरमा कति विद्यालय रेडियो, कति विद्यार्थी टेलिभिजन, कति विद्यालय इन्टरनेटको माध्यममा जोडिन सक्छन् भनेर उपमहानगरले सर्वेक्षण गरिसकेको छ । त्यसले गर्दा पनि अब असोजदेखि वैकल्पीक शिक्षण सिकाइलाई अगाडी लैजान सकिन्छ भन्नेमा हामी लागेका छौँ ।
मैले सबै विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई आ–आफ्नो विद्यालयको वास्तविक विद्यार्थीको अवस्थाबारे बुझ्न लगाएका छौँ । अहिले सबै विद्यार्थी भर्ना नभएका कारण पनि उपमहानगरमा के कसरी पढाउने ? भन्ने बारेमा एकिन भएको छैन् ।
तथ्यांक अनुसार उपमहानगरमा तीन प्रतिशत विद्यार्थीमात्रै इन्टरनेटको पहुँचमा रहेको देखिएको छ भने ६५ प्रतिशत बालबालिका टेलिभिजनको पहुँचमा रहेको देखिएको छ । उपमहानगरमा अहिले त सबैभन्दा बढी रेडियोमा ९० प्रतिशत बालबालिका छन् भन्ने तथ्यांक आएको छ भने १० प्रतिशत बालबालिका कुनै पनि माध्यमको पहुँचमा नभएको पाइएको छ ।
यस्तो अवस्थामा ती १० प्रतिशत बालबालिकालाई समुदायस्तरमै गएर भएपनि शिक्षण सिकाइलाई अघि बढाउनुको विकल्प छैन् ।
सरकारले वैकल्पीक शिक्षण सिकाइको बाटो खोलिदिएपछि निजी विद्यालयका संघ, संगठन प्याब्सन÷एन प्याब्सनका नेतृत्वलाई बोलाएर मैले वैकल्पीक छान्नुहोस् भनेर भनिसकेको छु । विद्यालयले आफ्नो परिवेश अनुसार शिक्षण सिकाइलाई अगाडी बढाउन सक्छन् ।
वैकल्पीक शिक्षाको कुरा गर्दा कुटीचौर, तुहीरनियापुरका विद्यार्थीको अवस्था निकै फरक छ । यस्तो अवस्थामा विद्यालयले उपयुक्त विधि छानेर शिक्षण क्रियाकलापलाई अघि बढाउन सक्छन् ।
पश्चिममा बालापुर विद्यालयको कुरा गर्दा उसले समदायमै पुगेर शिक्षण सिकाइलाई अगाडी लैजाने कुरा पनि छ । कोरोना संक्रमितको अवस्था शून्य रहेको अवस्थामा विद्यालयले सामुदायमै पुगेर शिक्षण क्रियाकलाप अघि बढाउने कोसिस गरिएको छ ।
वैकल्पीक विधिको विकल्प रहेन
कोरोना महामारीका कारण वैकल्पीक शिक्षालाई मान्यता दिनुको विकल्प रहेन् । कोरोना लामो समय रहने देखेपछि अहिले केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारलाई वैकल्पीक शिक्षण सिकाइलाई अगाडी बढाउन निर्देशन जारी गरेपछि अब हामीहरू पनि वैकल्पीक शिक्षण सिकाइलाई कसरी बढाउने ? भन्ने विषयमा छलफल थालेका छौँ ।
नेपालमा कोरोना रोकथामका लागि लकडाउन भएपछि घोराही उपहानगरले यसअघि वैकल्पीक शिक्षा रेडियोमार्फत दिने गरेको थियो । तर पछिल्लो समय भदौ यता बन्द भएका छन् ।
सरकारले असोज १ गतेदेखि फेरि निरन्तरता दिने भनेपछि घोराहीका सबै वडामा हामीले कुन विधिमार्फत बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने खोजी थालेका छौँ । यसअघि रेडियोबाट घोराहीमा अध्यापन भएपनि विद्यार्थी रेडियो, टेलिभिज, इन्टरनेट कुन माध्यममा बढी छन् अथवा कति छन् भन्ने एकिन भएन् । हामीले देखेको रेडियोभन्दा अरूबाट पढाउनुको विकल्प छैन् ।
पहिलेको वैकल्पीक शिक्षा विद्यार्थीको क्रियाकलापलाई सक्रिय बनाउने मात्र थियो । अहिलेको वैकल्पीक सिकाइ भनेको शैक्षिक सत्रको मान्य हुने आधार हो । कोरोनाकै कहरमा विद्यालयमा विद्यार्थीलाई बोलाई अध्ययन अध्यापन गराउने अवस्था नभएपछि अन्तिम विकल्प वैकल्पीक नै हो । अब हुने सिकाइले शैक्षिक सत्रको मान्य विद्यार्थीको कक्षा स्तरोन्नती हुने अर्थात् परिक्षा पनि हुने भयो ।
कोरोना कहरका कारण विद्यार्थी झोला बोकेर विद्यालय जाने ठाउँमा भर्चुअल तथा नन भर्चुअल कक्षा सञ्चालन हुने भयो । असोज १ गते नजिकिदै गर्दा उपमहानगरमा शिक्षण क्रियाकलापलाई कसरी अगाडी बढाउने ? भनेर छलफल शुरू भइसकेको छ । अन्य पालिकासँग पनि साझा केही सहमति होला ।
अब अहिले केही वडा अध्यक्षले समुदायस्तरमा पुगेर सञ्चालन गर्न सकिने कुरा गर्नुभएको छ । कतिपय विद्यार्थी थोरै भएका ठाउँमा विद्यालय नै सञ्चालन गर्ने कुरा पनि आएका छन् । अब विद्यालय नै सञ्चालन गर्ने कुरा त रहँदैन् । तर समुदायस्तरमा पुगेर सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था हुनसक्छ ।
अहिले विद्यार्थी विद्यालयमा भर्ना भई नसकेको अवस्थामा पनि हामीले के विधिमार्फत पढाइ सञ्चालन गर्ने कुरा अन्यौल रहेको छ ।
सरकारले निर्देशिक जारी गरेपछि अब वैकल्पीक शिक्षालाई निरन्तरता दिनुको विकल्प छैन् । फेरि यो पनि होइन कि विद्यालयको गेट खुल्यो, अब विद्यार्थी विद्यालयमा भर्ना हुन्छन् । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना संवेदनशील रोग हो भन्ने सबैले बुझेका छौँ, त्यसैले पनि विद्यालय नै सञ्चालन गर्ने अवस्था छैन् ।
वैकल्पीक शिक्षाको लागि अब असोज १ गतेदेखि भर्ना शुरू हुन्छ । करिब पाँच दिनपछि भर्ना भइसकेपछि कुन माध्यमबाट शिक्षण सिकाइलाई अगाडि बढाउने भन्ने छलफल भएपछिमात्र भन्न सकिने अवस्था हुन्छ ।
कोरोना कहरका बीचमा शैक्षिक क्षति नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ वैकल्पीक माध्यमबाट शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप अघि बढ्न थालेका छन् । वैकल्पीक सिकाइ विद्यालयमै फेस टु फेस पढाएको वा पढेको जस्तो नभएपनि शैक्षिक सत्र खेर जान नदिने सरकारको नीति हो ।
अभिभावकले पनि आफ्ना छोराछोरीको शैक्षिक सत्र खेर जान नदिनका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । वैकल्पीक माध्यमबाट शिक्षण सिकाइ गर्दा विद्यार्थीसँग नजिक शिक्षकभन्दा पनि अभिभावक हुन्छन् ।
शैक्षिक सत्र धकेल्ने यो एउटा वैकल्पीक मार्ग हो । यसमा सबैले उत्तिकै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । वैकल्पीक मार्ग भनेको नै विकल्पमा खोजिएको बाटो हो । त्यसैले पनि अभिभावक र विद्यार्थी उत्तिकै रूपमा जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।
प्रभावकारी विधिको खोजीमा छौं
कोरोना कहरका कारण शैक्षिक गतिविधिलाई सक्रिय बनाउन वैकल्पीक विधिको अवलम्बन गर्नुको विकल्प छैन् । लमही नगरपालिकले विद्यार्थीलाई शैक्षिक गतिविधिमा सक्रिय बनाउन यसअघि तीनवटा रेडियोबाट सिकाइ गर्ने गरेको थियो । लमही नगरपालिकामा सबै बालबालिका इन्टरनेट र टेलिभिजनको पहुँचमा नभएका कारण हामीले रेडियोमार्फत वैकल्पीक शिक्षण सिकाइ अघि बढाएका छौँ । अहिले त्यो कार्यक्रम बन्द भएको छ ।
रेडियोबाट पनि प्रभावकारी देखिएन् । शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी भए/नभएको पत्ता लगाउन गरिएको सर्वेक्षणमा धेरैले नसुनेको प्रतिक्रिया दिए, थोरैले मात्रै रेडियो सुनेको प्रतिक्रिया दिए । करिब ३० प्रतिशतले मात्र रेडियो सुनेको प्रतिक्रिया दिए । हामीले लमहीमा करिब एक महिनामात्रै सञ्चालन गरेका थियौं । त्यसपछि प्रभावकारी नहुने देखिएपछि हामीले रेडियोबाट सिकाइ बन्द गरेका हौँ ।
यस्तो अवस्थामा वैकल्पीक शिक्षा दिदा पनि सफल हुन नसकेको यर्थात् हो । अहिले केन्द्र सरकारले वैकल्पीक शिक्षण सिकाइलाई मान्यता दिएर त्यसैका आधारमा वैकल्पीक शिक्षण सिकाइलाई अघि बढाउन निर्देशिका जारी गरेपछि जसरी पनि शैक्षिक गतिविधिलाई अघि बढाउनुपर्ने चुनौती छ । नगरपालिकामा हामीले शैक्षिक गतिविधिलाई अघि बढाउनका लागि अहिले छलफल कै चरणमा रहेका छौँ ।
विभिन्न विद्यालयका प्रधानाध्यापक, वडा अध्यक्ष र सम्बन्धित सरोकारवालसँग छलफल गरेपछि मात्रै कसरी अगाडी लैजाने ? भन्नेमा छौँ । रोगबाट बचाउने र शिक्षा पनि प्रदान गरी बालबालिकाको शैक्षिक सत्र खेर नजान दिनका लागि नगरपालिकाले गम्भीररूपमा छलफल गरिरहेको छ ।
विद्यार्थी भर्ना, विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक पु¥याउने काम सम्पन्न भएपछि मात्रै वैकल्पीक शिक्षालाई अघि बढाउने भन्ने टुङ्गो लगाउने छौँ । आवश्यकताको आधारमा रेडियो, टेलिभिजन र इन्टरनेटको प्रयोग गरी शिक्षण सिकाइलाई अघि बढाउने कोसिसमा छौँ ।
वैकल्पीक शिक्षामा अभिभावकको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएका कारण अभिभावकलाई आफ्ना बालबालिकाको शिक्षाप्रति दायित्वबोध गराउनका लागि त्यो किसिमको सचेतना प्रदान गर्ने विचारमा पनि छौँ । संक्रमणको जोखिम नभएका ठाउँमा समुदायस्तरमै पुगेर अध्यापनलाई जोड्ने प्रयासमा छौँ । अहिले बालबालिका कुन विधिको पहुँचमा छन् ?
भन्ने विवरण तयार पार्ने काम भइरहेको छ । सबै ठाउँमा सूचना प्रवाह गरिसकेका छौँ । केही दूरदराजका बस्तीमा अध्ययन सामग्री पठाउने काम पनि भइरहेको छ । केन्द्रले पठाएका सामग्री वितरण गरिसकेपछि अध्ययन अध्यापनको काम अघि बढ्ने विश्वास गरेका छौँ ।
समुदायस्तरमै नपुगेरअरू विकल्प छैन्
केन्द्र सरकारले वैकल्पीक शिक्षण सिकाइलाई मान्यता दिने निर्देशिका जारी गरेपछि हामीहरूले पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेका छौँ । असोज १ गतेदेखि वैकल्पीक कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने र त्यसैबाट परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने भएपछि अहिले हामीले प्रभावकारी उपायको खोजीमा छौँ ।
कोरोना महामारीका कारण अरू क्षेत्रजस्तै शिक्षा क्षेत्र पनि नराम्ररी प्रभावित भएको छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षाका गतिविधिलाई कसरी सक्रिय बनाउने ? भन्ने चुनौती पनि छ तर अगाडि नबढाई नहुने बाध्यता छ ।
अगाडी बढाउँदै गर्दा कसरी अघि बढ्ने ? भन्ने गम्भीर प्रश्न छ । शान्तिनगर गाउँपालिकाका भौगोलिक हिसावले तराई र पहाड बराबरजस्तै छ । यस्तो अवस्थामा रेडियो पहुँच पनि सबैतिर नभएको अवस्था छ भने भने अन्य टेलिभिजन र टेलिफोनको त कुरै नगरौँ ।
यस्तो अवस्थामा गाउँपालिकामा वैकल्पीक शिक्षण सिकाइ कसरी लैजान सकिन्छ त भन्नका लागि निकै चुनौती छ । विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था पनि नभएको, सञ्चालन नगरी वैकल्पीक शिक्षण सिकाइको माध्यम पनि प्रभावकारी नदेखिएको अवस्थामा शैक्षिक गतिविधि अघि बढाउन समस्या नै छ ।
तर सरकारले असोज एकबाट शैक्षिक गतिविधि अघि बढाउन निर्देशिका जारी गरिसकेको अवस्थामा हामीले यसअघि सञ्चालन गरेको समुदाय शिक्षालाई निरन्तरता दिनुको विकल्प देखेका छैनौँ । तैपनि हामीले वैकल्पीक शिक्षाको विधि खोजिरहेका छौँ । यस विषयमा विद्यालयका सम्बन्धित प्रधानाध्यापकसँगको छलफलपछि मात्रै हामीले कुन विधिमार्फत शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप अघि बढाउने भन्नेमा टुङ्गोमा पुग्ने छौँ ।
गाउँपालिकाको समग्र अवस्थालाई हेर्दा त शिक्षक र विद्यार्थीले पर्याप्त स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी समुदायस्तरमा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप अघि बढाउने विचारमा पनि छौँ । गाउँपालिकामा कतिपय यस्ता ठाउँ छन् । जुन ठाउँमा भौगोलिक विकटताका कारण मानिसहरूको आवत–जावत कम भएका कारण पनि कोरोनाको प्रभाव देखिएको छैन् ।
त्यस्ता संक्रमणको कम जोखिम भएका ठाउँमा हामीले विद्यालय नै सञ्चालन गर्ने विचार पनि गरेका छौँ । ति विद्यालय भनेका वस्ती पातलो भएको ठाउँका विद्यालय हुन् । जहाँ एउटा कक्षामा १५ जनाभन्दा बढी विद्यार्थी हुँदैनन् । यस्तो अवस्थामा विद्यालय सञ्चालन गर्ने कि भन्ने सोंचमा छौँ । तर विद्यालय सञ्चालन गर्दै गर्दा शिक्षक र विद्यार्थीको सुरक्षाका कुरा पनि गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्छ ।
शिक्षकलाई पर्याप्त सुरक्षा सामग्री नहुँदा पनि अध्यापन गराउन निकै मुस्किल देखिन्छ । कम्तिमा पनि सम्बन्धित शिक्षकलाई सुरक्षाका सामग्री वितरण गर्ने,
सबैको बिमा अनिवार्य गरिदिने र अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई सचेतीकरण बनाउने कुरामा पनि हामी लागि रहेका छौँ । शिक्षकको बिमा गरिसकेका छौँ, अब सुरक्षाका सामग्री उपलब्ध गराउन अलि बढी चुनौती देखिएको छ ।
सबैको व्यवस्था गर्न सकियो भने समुदायस्तरमा शिक्षकहरूलाई परिचालन गर्ने र वैकल्पीक शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउने कोसिसमा छौँ । सबै विद्यार्थी रेडियो, टेलिभिजन र इन्टरनेटको पहुँचमा नभएका कारण पनि हामीले समुदायस्तरमै पुगेर अध्यापनलाई जोड्ने प्रयासमा छौँ ।